मद्दतको उद्धार प्राप्त गर्नुहोस् - 802०२ क्विट्स
घर » Vermonters » म छोड्न चाहन्छु » Quitting मद्दत प्राप्त गर्नुहोस्
भर्मोन्टका बासिन्दाहरूलाई छोड्नको लागि अनुकूलित र लचिलो तरिकाहरू।
सिगरेट, ई-सिगरेट वा अन्य सुर्तीजन्य उत्पादनहरू सफलतापूर्वक छोड्ने तपाईंको संभावनाहरू सुधार गर्न त्यहाँ तपाईंले धेरै चीजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। १-1००-क्विट-NOW मा एक भर्मोनट छोड्ने पार्टनर वा क्विटलाइन कोचसँग काम गर्दा तपाईंको सफलतापूर्वक छोड्ने सम्भावना बढ्छ, विशेष गरी जब छोड्ने औषधिसँग मिलेर। त्यसकारण प्रत्येक छोड्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दछ निःशुल्क प्याच, गम र lozenges र तपाइँलाई अनुकूलित छोड्ने योजना निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईंले विगतमा पथ प्रयोग गर्नुभयो जुन काम गरेन भने, अर्को प्रयास गर्न विचार गर्नुहोस्।
जब तपाईं धुम्रपान, भाप वा अन्य सुर्ती छोड्ने बारेमा सोच्नुहुन्छ, के तपाईंले सोच्दै हुनुहुन्छ कि थप समर्थनको कुन प्रकार तपाईंको लागि सही छ? यहाँ छ कि तपाइँ प्रत्येक प्रकारको छोड्ने मद्दतबाट के अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ।
सहयोग छोड्नुहोस्; अब ईन्रोल गर्नुहोस्:
गर्भवती वा नयाँ आमा?
नि: शुल्क मद्दत छोड्नुहोस् तपाईं र तपाईंको बच्चाको लागि धूम्रपान र अन्य सुर्ती।
नि: शुल्क मद्दत प्राप्त गर्नुहोस्>